#प्रेस विज्ञप्ति Archives - Left Review Online
Tag: #प्रेस विज्ञप्ति
के अस्पतालले कुनै मानिसलाई बचाउन अस‌ंभव छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्न मिल्छ ?
काठमाडौं । के कुनै अस्पतालले आफ्नो अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई बचाउन असंभव छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्न मिल्छ ? आज नेकपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई बचाउन सक्ने संभावना असाध्यै न्यून रहेको भनेर उहाँ उपचाररत ह्याम्स अस्पतालले बताएपछि यो प्रश्न चारैतिर उठेको छ । अस्पतालले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अधिकारीको...बाँकी
#प्रेस विज्ञप्ति#भरतमाेहन अधिकारी#भेन्टिलेटर#ह्याम्स अस्पताल